Kitra – Andrianony Victorien : tsy mbola tonga ao amin’ny FMF ny vola avy amin’ny Fifa | NewsMada
Kitra – Andrianony Victorien : tsy mbola tonga ao amin’ny FMF ny vola avy amin’ny Fifa
«Tsy mbola tonga ny vola avy amin’ny Fifa, hanampiana ireo ligy 22, hiadiana amin’ny «covid 19» fa ny 200.000 dôlara avy amin’ny Caf no ao, saingy natao am­pan­de­ha­na­na ny asa eo anivon’ny FM», hoy Andrianony Victorien, filoha vonjimaika.
Gazety Taratra (-) : Sala­ma ve sa marary ny baolina kitra malagasy ?
Andrianony Victorien (*): Sarotra ny hiteny azy hoe marary satria ny mpilalao rehetra sa­la­ma tsara daholo ary isaorana an’Andriamanitra, tsy voan’ny «coronavirus» fa noho ny toe-java-misy iainan’izao tontolo izao, amin’ity areti-mandoza ity dia iharan’izany koa ny firenena malagasy sy ny baolina kitra eto amintsika. Miato avokoa ny he­tsika rehetra, araka ny baikon’ ny fanjakana. Raha tenenina amin’ny teny tokana izany dia marisarisa noho izay tsy fahafahana manao fifaninanana izay.
– Voalaza fa olon-dRa­be­ko­to Raoul ihany ianao. Marina ve izany?
* Betsaka tokoa ny milaza izany ary ny mampalahelo aza, misy namana miteny fa olon-dRaoul, io filoha vonjimaika io. Angamba tsy tokony hipetraka ilay izy satria fikambanana ny fe­de­rasiona fa tsy antoko politika, izay misy izany. Araka izany, olo­na iray ihany izahay 10 mianadahy mianaka mandrafitra ny komity mpitantana. Raha ny marina iza­ny, olon’ireo ligy 22 izahay sa­tria ny filohan’ny ligy 22 no nifidy an-dRaoul ary mbola izy ireo ihany koa no nametraka anay.
– Misy antony ve ny fahanginan’ny FMF, amin’izao fo­to­ana izao?
* Mangina satria tsy misy ny asa eny ambony kianja noho ny fiatoan’ny fifaninanana fa miasa ary mihodina tsara ny fampandehan-draharaha rehetra ao amin’ ny federasiona, satria ny lehibenay voalohany, dia ny federasiona iraisam-pirenena (Fi­fa) sy ny kaonfederasiona afri­kanina (Caf), mifandray aminay tsy tapaka.
– Mimenomenona ireo filohan’ny ligy sasany fa tsy nahazo ilay vola fanampiana avy amin’ny Fifa hiadiana amin’ ny “Covid 19”. Ahoana ny fi­tsinjarana azy?
* Mahabe resaka ny rehetra tokoa izy io. Marina fa efa misy vola tonga avy amin’ny Caf, mitentina 200.000 dôlara ao, saingy voalaza fa natao hiasan’ ny federasiona. Tsara ho fantatry ny rehetra fa misy “audit” ny fampiasana ny vola avy amin’ ireo rafitra misahana ny baolina maneran-tany ireo fa tsy izay tian’ny federasiona atao aminy akory. Mikasika ny vola hanampiana ireo ligy hiadiana amin’ny “covid 19”, efa nampanantena izany ny Fifa, saingy tsy mbola nalefany aty amin’ny FMF iza­ny. Rehefa tonga io vola io, tsy maintsy mahazo ireo ligy 22.
– Aiza ho aiza ilay fanga­tahana vola fanampiana nataon’ny CFEM (Club de football elite de Madagascar) hiatrehana ny taom-pilalaovana 2021.
* Ny fangatahana dia tsy olona iray no manapaka azy. Amin’ny maha fikambanana ny FMF, tsy maintsy dinihin’ny mpi­kambana rehetra ny fahafahana manao izany. Satrinay fe­derasiona ny hanampy satria izay no himatimatesana dia ny hampandeha ny baolina kitra malagasy.
– Inona no hafatry ny filoha vonjimaikan’ny Fede­ra­siona malagasin’ny baolina kitra?
* Ho an’ny mpitia baolina kitra eto Madagasikara sy any ivelany, manàna fitokisana aminay satria nametrahana adidy sy andraikitra izahay ary tsy handraraka ilo mby an-doha, amin’izany. Tsy hanao afa-tsy ny hampandroso ny baolina kitra malagasy ary hiezaka hitazona farafaharatsiny ny laza efa tsara vitan’ny Barea. Miara-mi­asa amin’ny filoham-pirenena amin’ny fampandrosoana ny fi­renena ny FMF ka ny anjara bi­rikinay dia ato amin’ny baolina kitra.
Dinika nataon’i Torcelin